Banyere Anyị - Shandong Kunda Steel Co., Ltd.
Anyị bụ ndị gị n'ụlọnga nke ama Steel ụlọ mmepụta ihe na China.We ike 100% hụ na anyị na ngwaahịa mma.
Nke abuo: Anyị nwere ebe nhazi nke aka anyị, nke nwere ike ịnye ọrụ ahaziri iche. Dị ka ekwe, ịgbado ọkụ, polishing, nchara-ọgwụgwọ, kpaliri.
Nke ato, Anyị nwere karịa 2000tons na ngwaahịa, Nke ahụ pụtara oge nnyefe naanị ụbọchị 3-5.
N'ikpeazụ, anyị ụlọ ọrụ tọrọ ntọala na 2010, ya mere, anyị nwere afọ iri na ahụmahụ na ígwè ụlọ ọrụ. O doro anya na anyị nwere ike ịnye gị ọrụ ọkachamara maka gị.
Shandong Kunda Steel Co., Ltd. Emi odude ke Liaocheng obodo, Shandong n'ógbè, nke bụ a ọmarịcha obodo okpueze dị ka ＂Oriental Venice＂. Liaocheng na ọdịda anyanwụ nke mpaghara Shandong, 200Km South site na Beijing City, 100Km ọdịda anyanwụ site na Jinan City. ngwa ngwa ma kpụọ nnukwu ígwè lọjistik center na North China.
Shandong Kunda Steel Co., Ltd. tọrọ ntọala na 2006, mepụta enweghị nkewa anwụrụ na oyi na-atụ anwụrụ.
Na 2010 debara aha ma guzobe Laiwu Steel ụlọ ọrụ Liaocheng Sales Branch, na-ere ahịa nke Wear Resistant Steel Plate.
Kunda Steel ụlọ ọrụ mma oruru site Industrial na Commerce Bureau na 2014, aku na-eme ngwaahịa azụmahịa, gụnyere igwe anaghị agba na carbon ígwè ngwaahịa, ígwè efere, anwụrụ na gburugburu mmanya.
Na 2016 guzobere ndị otu azụmahịa mba ofesi. 6 ọrụ maka ndị ahịa si mba ọzọ.
Na 2016, guzobere igwe anaghị agba nchara welded anwụrụ factory, mepụta gburugburu, rektangulu na square anwụrụ.
Na 2017, guzobere ụlọ ọrụ ndu, isi na-emepụta mpempe akwụkwọ ndu, ọnụ ụzọ ụzọ, iko ụzọ, apron na wdg.
Na 2018, guzobere ụlọ ọrụ Spraying, zụta igwe ọgbụgba na ihe osise ọhụrụ maka ọkpọkọ, efere na ihe ndị ọzọ.
Na 2019, na CNC ogbako e guzobere, ịzụta ọhụrụ eriri ọnwụ igwe, ekwe igwe, malite ịgba igwe, hụrụ igwe.
Na 2020, ndị otu azụmaahịa mba ofesi ghọrọ ndị otu atọ.
Ugbu a Shandong Kunda Steel Co., Ltd. nwere ike iweta otu ọrụ, site na ihe igwe ihe na-emepụta iji mechaa ngwaahịa, gụnyere Wear na-eguzogide efere efere / Weathering Steel plate / High Strebon Carbon Steel plate / Stainless Steel / Aluminium / Brass / plate / round bar / angle bar / flat bar / profile Ihe ndị a niile nwere ngwaahịa maka nha oge niile, efere tọn 2000, pipụ puku 1000 na ihe ndị ọzọ.
Na Concepts of ＂Nọgidenụ Na-enwe ， Win-mmeri Cooperation ， ， na gburu site pụrụ ịdabere na àgwà na mgbe ahịa ọrụ usoro, Kunda nweela aha ọma site ahịa n'ụlọ na mba ofesi. !
Imekọrịta na ndị ahịa
Transportgbọ njem Anyị